लेखन कुञ्जमा छन्द कविताको नयाँ शृंखला – Pahilo Page
१ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०५:२० 882 पटक हेरिएको
अहिले छन्द कविताको अवस्था के छ ? कति रचना हुन्छ ? ठ्याक्कै लेखाजोखा छैन । कविताको यो विधा ओझेल पर्दै गएको पृष्टभूमीमा लेखन कुञ्जले एउटा अभियान छेडेको छ, छन्द कविताको मानकीकरणका लागि ।
यसको मूल उदेश्य हो, छन्द कवितामा सर्जकहरुलाई प्रोत्साहित गर्नु । यो अभियान बर्षभर जारी रहने आयोजक संस्था लेखन कुञ्जका अध्यक्ष कमल ढकालले बताए । ‘यो एउटा ऐतिहासिक थालनी हो’ उनले भने, ‘अबको दिनमा यसले छन्द कविताको नयाँ खाका कोर्नेछ ।’
थापागाउँस्थित लेखनकुञ्जामा हालै यसको थालनी भएको छ । डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र डा. देवी नेपालको छन्द जागरण अभियानको दुई दशकको सहयात्रालाई मूर्त रुप प्रदान गर्दै यो शृंखला सुरु गरिएको छ । अब हरेक महिना तीन जना प्रतिनिधि कविहरुको कविता प्रस्तुत गर्दै छन्द तरंग मासिक शृंखला जारी राखिने बताइएको छ ।
थालनी कार्यक्रममा छन्द अभियान्ता रमेश खकुरेल, प्रा. राजेन्द्र सुवेदी, प्राज्ञ नर्मदेश्वरी सत्याल, डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, कोषराज्य न्यौपाने, प्रा.डा. हेमचन्द्र नेपाल, डा. शैलेन्दु प्रकाश नेपाल लगायतले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै अक्षयकोष स्थापनाका लागि कवि भारद्वाज मित्रले आफ्नी आमाको सम्झनामा एक लाख रुपैयाँ प्रदान गरेका थिए ।
प्रत्येम कहिनाको तेस्रो सुक्रवार ३ः३० बजे देखि ५ बजेसम्म छन्द तरंग नयाँ बानेश्वर, थापागाउँस्थित लेखन कुञ्जको पे्रक्षलयमा हुनेछ । शृंखलाको थालनी १५३ औं मोती जयन्तीको सन्र्दभ पारेर भदौ २२ गते सुक्रवारबाट हुनेछ ।